जब आकाशबाट सडकमा माछा खस्न थालेपछि (भिडियो सहित) – Taja Khawar
जब आकाशबाट सडकमा माछा खस्न थालेपछि (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १७, २०७८ समय: ११:४१:५५
June 30, 2020 37018
आकाशबाट माछा किन र कसरी बर्सिन्छन् ?
यदाकदा हामीले आका’शबाट माछा वर्षिएको समाचार सुनेका छौं । हावाको चाप कम भएको स्थानमा बढी चाप भएको क्षेत्रबा’ट तीव्र गतिले हावा बहन्छ ।
तीव्र गतिले हावा ब’ढ्दै जाँदा दायाँ बायाँ र अगाडिबाट आइरहेको त्यस्तै शक्तिशाली हावासँग ठोकिएर फर्कन खोज्छ । यसरी विपरीत दिशाबाट आएका हावाले जोड’सँग धकेल्दा उक्त ठाउँ’मा भुमरी पर्छ ।
हिँडडुल गर्दा मैदान वा बाटो’मा यस्तो भुमरी देख्छौं’ । भुमरी पर्दा जमिनको धुलो, कपडा तथा कागज’का टुक्रा, रूखका पात निकै माथिसम्म पुग्छन् ।
हावा’को बेग जब कम हुन्छ तब ती सबै वि’स्तारै जमिनमा खस्छन् । ठुल्ठूला भुुमरी पर्दा अक्सर आँधी–बेहेरी चली धुलो उड्ने, मेघ गर्जने र सिमसि’म पानी पर्ने हुन्छ । त्यस’बेला कहीँ–कतै आ’काशबाट माछा बर्सेको हामीले सुनेको वा देखेका छौं ।
भुमरी समुद्र, ठूला ताल र पोख’रीमा पनि पर्छ । अति शक्तिशाली त्यो भुमरीले पानी’को माथिल्लो भाग छोएपछि पानीको सतह घुम्छ र घुमाइको शक्ति भित्री पिंधमा ठोकिएर भुमरी जोड’ले हुतिएर माथि’सम्म आउँछ ।
त्यसवेला भुम’रीले माछा, भ्यागुता, स–साना किरा लिएर आएको हुन्छ । त्यसलाई हावाले उडाएर आकाशसम्म पु¥याउँछ । अनि भुम’रीको शक्ति कम भएपछि माछालगायत किरा जमि’नमा खस्छन् । –एजेन्सीको सहयोगमा ( यसको भिडियो हेर्न तल जानुहोला )
यो प’नि … भाग्य चम्किँदा एक युवा यसरी बने करोडपति
धेरै मान्छे’हरु कर्म गर्ने तर फलको आ’श नगर्ने पक्षमा रहने गरेका छन् । तर सधैं कर्मका कारण मात्रै सफलता हात पर्छ भन्ने कुरा सधै सत्य हुँदैन । कहिलेकाँही भाग्य’को चमत्कार पनि देखिने गर्दछ ।
यस्तै एक घट’ना बाहिर आएको छ । तान्जानियाका एक सामान्य नागरिक रातारात करोडपति बनेका छन् । अहिलेसम्म’कै सर्वाधिक ठूलो तान्जानाइट नामक बहुमूल्य रत्न फेला पारेका उनी एक रातमैँ करो’डपति बनेका हुन् ।
कुल १५ किलो तौल भएका दुईवटा पत्थर फेला पा’रेका सानिनिउ लाइजर’ले खानी मन्त्रालयबाट ४१ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम प्राप्त गरेका हुन् । उक्त सफलता’पछि ति व्यक्तिले भने, ‘भोलि ठूलो भोज हुन्छ ।’ गहना बना’उन प्रयोग हुने तान्जाना’इट पत्थर उत्तरी तान्जानियामा मात्रै पाइन्छ ।
यो पृथ्वीमा पाइने दुर्लभ रत्नहरूमध्ये एक हो । एक स्थानीय भूवैज्ञा’निकले यसको आपू’र्ति आगामी २० वर्षभित्र समाप्त हुने अनुमान गरेका छन् । यो पत्थरलाई हरियो, रातो, बैजनी र नीलो रङ्गको विविधताका कारण विशेष मानिन्छ। यसको मूल्य रङ्गको दुर्लभ’ताको आधा’रमा निर्धारण गरिन्छ ।
तर जति राम्रो रङ्ग र सफा छ, मूल्य त्यति नै बढी हुने अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्य’महरुले जानकारी गराएका छन् । राष्ट्रप’ति जोन मागुफुलीले फोन गरेर लाइजरलाई बधाई दिएका छन् । भर्खरै करो’डपति बनेका ५२ वर्षीय लाइजर खानी’मा रत्न र बहुमूल्य पत्थर खोज्ने काम गर्दै आएका थिए ।
उनका चार’वटी श्रीमती र ३० सन्तान रहेको कुरा समा’चारमा उल्लेख गरिएको छ । उनले आफ्नो समुदा’यका लागि पनि लगानी गर्ने बताएका छन् ।- एजेन्सी
माछा वर्षा हेर्नुहोस् भिडियोमा ….
Last Updated on: August 1st, 2021 at 11:42 am
९७९ पटक हेरिएको